Gribkova Natalya Borisovna - onguMphathi we-Russian State Social University, Doctor of Economic Isayensi woprofesa. Kodwa lo muntu wesifazane omuhle futhi ekhangayo futhi namanje ubuntu okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi ukuphila kwakhe okwenzeka ngaphansi ukulalelisisa press njalo.
Gribkova Natalia Ngazalelwa eMoscow ngo-July 4, 1976. Unina wayesebenza wezinzwa esibhedlela. Ngisho nangesikhathi beseyizingane Natalia Gribkova umxhwele kwezemidlalo, futhi abazali baye bazama ukwenza konke entombazaneni ukuqaphela ngokwayo kule ndawo. Futhi basiza intombazane ukuhlanganisa izifundo zakhe esikoleni nemisebenzi yayo yezemidlalo.
I impumelelo yezemidlalo lokuqala aye intombazane ngokushesha okukhulu, nakuba umsebenzi wakhe le njongo ezingamaKristu kwakudingeka zisebenzele. Everyday umsebenzi akhathazayo kwaholela eqinisweni ukuthi waba owawina imincintiswano eminingi. Bagqunywa hhayi kuphela ezingeni lesifunda, kodwa futhi Russia.
Ngo-1991 Gribkova Natalya wangena Russian junior eqenjini lesizwe. Athletics isibe ingxenye enkulu yokuphila Natalia. Phakathi neminyaka emine ukuthi kwaba yingxenye yeqembu, waba owawina imincintiswano international. Hlangana nokuzuza lokhu abasubathi omkhulu ziye ngokuwina futhi egijima: ibanga nebanga amamitha ayisishiyagalombili nengxenye ayizinkulungwane amamitha. Futhi ngisho abangu won udlulisela ezifana 4 kuya 400 metres.
Ngakho-ke, yena waklonyeliswa isihloko Master of Sports. Futhi iminyaka eyishumi nantathu ngesikhathi intombazane kwakukhona ngisho incwadi umsebenzi kulo wawuthi Natalia Gribkova kuyinto umsubathi-instructor. By endleleni, le ntombazane wathola nenkokhelo. Imali yakhe kwaba ngaphezu omkhulu ukuba ibhajethi umndeni, njengoba cishe uhhafu inkokhelo kanina.
Kodwa amakilasi ezemidlalo ungagxambukeli Natalya ukuyothola imfundo. Azi kahle kamhlophe ukuthi kuzomele ube uhlobo oluthile umsebenzi, Gribkova Natalya engena 1993 State University iqanjwe Plekhanov. Umnotho futhi noma yini ehlangene nakho, sithakazelo intombazane.
Ukutadisha eyunivesithi kulula futhi ngenxa yakhe Gribkova Natalia ikhetha ukushiya umdlalo, ngisho nalapho kungase kube ikusasa eliqhakazile. Wafunda at ikhono ezimbili: "Ezezimali kanye Credit" futhi "Intela". Ngo-1997 nge-honours iziqu Russian University of intombazane.
Kodwa imisebenzi yokufunda ngakho bethatheka intombazane ukuthi Natalya Gribkova, Pochinok umyeni wakhe, ngo-2000 wangena esikoleni iziqu enyuvesi ekhaya okukhethekile "inqubomgomo yentela". Kube wafunda 2002. Ngalesi sikhathi wakwazi ukuthola imfundo ngesiRashiya State Social University. Futhi ngo-2001, nge mqondo, wathola PhD in Economics.
Ngo-2004, iziqu kwezomnotho eMnyangweni efanayo etholwe. Ngo-2014 - isihloko woprofesa emnyangweni "Izintela kanye intela".
Ukuze uthole iziqu zemfundo, yokulungisa unkosikazi, Natalya Gribkova, olwenziwa bacwaninga emkhakheni nezomnotho kuleli zwe. Ayenesithakazelo kuyo ngendlela izwe iya impesheni, lokho inqubomgomo yentela futhi yini uhlelo intela Kwakhiwani. Yena kubhekwa kanjani isabelomali izinsiza kanye nezinsiza ngaphandle kwe-ke basuke esihlobene futhi nomthelela labantu. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lwakhe Natalia B. wazama nezindlela kumiswa isabelozimali kanye nezintela, lapho izakhamuzi kungaba ngaphezulu asebenzayo.
Ngokukhethekile ikhokhelwa ekuthuthukiseni Natalia Gribkova ibhizinisi. Konke ucwaningo nokwakheka kwalo awazange kuphela kubonakala ozakwabo uhulumeni, kodwa futhi kwaziswa kakhulu.
Natalia B. uwukhuthalele umsebenzi nomphakathi. Okwamanje, eyilungu le-Academy of Social Sciences yeRussia. Kodwa ngesikhathi esifanayo ngempumelelo ukuhlanganisa umsebenzi yokuhlalisana kwabantu futhi komphakathi, lapho lokuqala elifike EMA IN.
Naphezu kwakho konke lokhu umsebenzi kanye nomsebenzi ucwaningo, futhi umsebenzi wayo oyinhloko, Natalia Gribkova, umfazi sezombangazwe esivelele Aleksandra Pochinka, isayilungu seNkantolo association sezemfundo futhi methodical emanyuvesi Russian, kanye amadili nochwepheshe imisebenzi komThethosisekelo State Duma IKomidi eliQondene nezeziMali. Kodwa lokhu kuyinto asebenzayo futhi ezikhangayo Natalia B. ngeke ayeke.
Umsebenzi Natalie fungal iqale ngo eyishumi nantathu ubudala futhi zihlotshaniswa ezemidlalo. lokuqala kwalo encwadini yomsebenzi isibe umsebenzi umsubathi-ofundisa athletics, bese, kusuka 1994 kuya ku-1996, uye wamabhuku ezimali ngendlela elula futhi "Strojservis".
Ngo-1996 Gribkova Natalia, ogama Umlando womuntu ophilako egcwele izenzakalo, kuba umsebenzi unomphela ibhizinisi Consulting. Nanguya iminyaka eyisikhombisa isikhathi ukuhlanganisa hhayi kuphela sezifundo zaseyunivesithi ngomsebenzi, kodwa babephinde basebenze izinkampani ezimbili.
Umsebenzi wakhe onzima kuholela yokuthi wathenjiswa esihlalweni uSekela Mongameli "Gazprom". Ngemva kweminyaka emibili washayeka uzibophezele nokuthi inkampani igesi, kodwa ekuqaleni kakade ukuze wenze imisebenzi yasebhange ngo-2005. Wayeqale waqala ukusebenza "Raiffeisenbank", lapho ngokushesha wathuthukela ngokusebenzisa le nkonzo. Ngakho, wakwazi ngo-2009 ukufinyelela isikhundla usihlalo umeluleki ebhodini.
Kodwa ngo-2010, Natalia B. sidluliselwe Savings Bank futhi baba umqondisi ukuphathwa. Lenza ukusebenza amagatsha ebhange, kodwa abhekana ngayo nesimo.
Kodwa ngesikhathi esifanayo ukubhekana Natalia B. nokufundisa. Ngakho, kusukela ngo-1998, ofundisa eNyuvesi ikhaya eMnyangweni "Intela". Ngo-2011, wayengesona womfundisi senior University yaqanjwa Plekhanov, waba uprofesa. Ngokusebenzisa eba kwenhloko yomnyango efanayo.
Ngo-2014 phezulu onyakeni omusha imfundiso kufinyelelwa: Natalia B. esimisiwe esebenza Umphathi Russian State Social University. Wakhe isipiliyoni umsebenzi iminyaka engaphezu kuka engamashumi amabili nambili. Ingxenye enkulu yalezi iminyaka zabasebenzi iye enikelwe cwaninga nokufundisa.
A indima enkulu ekuthuthukiseni umsebenzi we Natalia fungal kudlalwa umyeni wakhe, owayevele owayengusombusazwe abadumile hhayi kuphela, kodwa futhi indoda enamandla.
Okwamanje, Natalya Borisovna Pochinok has izincwadi ezihlukahlukene ngokwesayensi. Bonke elalinikezelwe kwezomnotho indaba ephathwayo. The main theme izincwadi zakhe - kuyinto intela. ezesayensi umsebenzi "Ulwazi ngomlando intela," esanyatheliswa ngo-2014. Kwakukhona nezinye izincwadi sithakazelise futhi ngokwesayensi.
Ngokubambisana nezinye ososayensi Natalia B. futhi yakhululwa izifundo zokuqeqesha ezintathu namabhukwana ngabo.
umyeni wakhe wesikhathi esizayo wahlangana Natalia Gribkova usengumfundi lapho efunda e-Academy yaqanjwa Plekhanov no-Aleksandru Pochinok ngesikhathi efundisa khona. Wayeshadile futhi indodakazi akhe akhulela emkhayeni wakhe. I diploma, awubhale ke, bebambisana. Ngokushesha ngemva kwesehlukaniso Aleksandra Pochinka nomkakhe kuqala futhi waboshwa emshadweni wesibili ukuba Nataley Borisovnoy fungal okuyinto sanquma ukugcina igama lakhe sasekhaya.
Ngo-2000, umndeni abasha watala indvodzana, uPetru, 2002 - indodana ka-Alexander. Natalia wazala izingane Gribkova eMelika ukuthi izakhamuzi ezimbili. Njengazo zonke izakhamuzi zaleli zwe namadodana ayo Unelungelo lokuthola imfundo enhle kakhulu. Manje izingane zakhe Melika iyindawo unomphela lokuhlala. Ngakho-ke, basuke okwamanje libhaliswe nezikole ezizimele e-United States.
Kodwa lokhu isikhathi eside, Natalia B. wagxeka ngoba bagqugquzela imfundo isiRashiya, kanti izingane ababeqeqeshwe phesheya. Ngenxa yalokhu, ngo-2015 wanquma ukushiya ngisho okuthunyelwe ka li we nyuvesi. Kodwa kukhona esinye inguqulo yalesi sinqumo ezingalindelekile. Abaningi nawozakwabo wagomela ngokuthi emsebenzini yayo yesayensi kokuhlola umqondo womunye ngenkathi sasihaqiwe yizihlalo amaningi kakhulu lathathwa imisebenzi yabanye. Ngakho-ke, kuvele acelwe ukuba aphume okuthunyelwe. Kodwa wahlala ukufundisa eyunivesithi.
Ndawonye, lo mbhangqwana wahlala iminyaka eyishumi nane. Alexander Pochinok wazama ukusiza umkakhe zonke emitameni wakhe. Kodwa ngo-2014 u-Aleksandr Pochinok yena ubulawe yisifo sohlangothi. Kuphela ngemva kokufa komyeni wakhe, Natalia B. wathatha nesibongo sakhe.
Eduard Taran: Biography, izithombe, umndeni, unkosikazi Tarana Eduard Anatolyevich. Taran Eduard futhi RATM
Galina Yudashkin: Biography emfushane
Chetan Hansradzh: izithombe, biography, amabhayisikobho
Ukwelashwa rhinitis iguliswa. Izindlela ephumelela kunazo
Club "imvula Isiliva" Sokolniki (Karting Centre): Izibuyekezo
Uhlu best horror amafilimu ukuthi babe nemilenze ndikindiki futhi kuzuba inhliziyo
Njengoba amandla ayo futha imoto
Nabesifazane Virgin. izimpawu Isici zezinkanyezi
Ubani ihlangabezana Nyusha - sihlabani esaziwa show ibhizinisi Russian?
Inqolobane Nizhnesvirsky - ukongiwa ifa yemvelo
Udweba kanjani ingulube enhle, futhi okubaluleke kakhulu, kukholakale.